छिमेकी देश चीनमा अनौठो परम्परा विवाहपछि बेहुलाको साथीसँग बेहुलीले यस्तोसम्म गर्नुपर्छ ! - Purbeli News
छिमेकी देश चीनमा अनौठो परम्परा विवाहपछि बेहुलाको साथीसँग बेहुलीले यस्तोसम्म गर्नुपर्छ !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख ०३, २०७६ समय: १६:५४:५५
काठमाडौं / नेपालमो उत्तरी छिमेकी देश चीनमा अनौठो परम्पराहरु रहेका छन् । चीनका मानिसहरुको बारेमा भनिन्छ, उनीहरु रोमान्टिक विचारको मामलामा अलिकति रुढिवादी नै हुन्छन् । तर विहेपछि खेलिने खेल (वेडिङ गेमको)को सन्दर्भमा उनीहरु खुला विचारका हुन्छन् । यस्तोमा एक वेडिङ गेमको भिडियो सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल बनेको छ । जसमा बेहुलाका साथीहरु उनकै अगाडी उनकी श्रीमतीका लुगाहरु फुकालिरहेका छन् ।
भिडियोमा देखाएको छ बेहुला बेहुली दुइटै बेडमा बसिरहेका छन् । यसै बेला बेहुलाका केही साथीहरु बेहुलीका लुगा फुकाल्ने कोशिस गरिरहेका छन् । बेहुली यसबाट बाँच्नको लागि आफुलाई रातो रङको कम्बलमा लुक्न खोजिरहेकी छन् । र साथीहरु लुगा फुकाल्ने कोशिस गरिरहेका छन् । बेहुली चिच्याइरहेकी छन् र बाँच्नको लागि कम्बलले ढाक्ने काशिस गरिरहेकी छन् । बेहुलाका एक जना साथी बेहुलीको अन्डरवेयर खोल्नको लागि खिचिरहेका छन् ।
यस्तो खेलमा बेहुलालाई अप्ठ्यारो महशुस भइरहेको छ र उनले साथीहरुसँग यसलाई बन्द गर्न र बेहुलीलाई कम्बल भित्र लुक्न सुझाव दिइरहेका छन् । लगभग एक मिनेटको वेडिङ गेमको यो भिडियो एउटा चिनियाँ नागरिकले सेयर गरेको छ । कसैले उनीहरुको बोली सुनेर उनीहरु मध्य चीनको हेनान प्रान्तका हुन् भनेर दावी गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म यो भिडियो लाखौ मानिसहरुले हेरिसकेका छन् । चीनमा नवविवाहित जोडीको पुरै काम गरेर घर गएपछि यस प्रकारको गेम राखिन्छ ।